Fahasalamana - Miisa 788 ireo voan'ny androbe noraisina an-tanana
Fahasalamana – Miisa 788 ireo voan’ny androbe noraisina an-tànana
Mahatratra 788 ireo voan’ny androbe noraisin’ny tetikasa Anjaratsara an-tanana nandritra ny telo taona.
Fandraisana an-tànana ireo voan’ny androbe
Mbola sarotra ny fitsaboana ny aretina androbe eto amintsika. Antony maro no mahatonga izany toa tsy ny fahafahan’ireo marary mividy fanafody hitsaboana ny tena.
Maharitra dimy taona eo ny fitsaboana ny aretina androbe. Noho izay faharetana izay dia maro ireo marary no tsy maharaka amin’ny fividianana fanafody. Na dia eo anefa izany dia azo sitranina tsara ny aretina androbe. Voahilikin’ny fiarahamoninana ihany koa ny olona voan’ny androbe ireny.
Manoloana ireo olana sedrain’ny olona tratran’ny androbe ireo dia misy ny fandraisana antanana ataon’ny tetikasa Anjaratsara nanomboka ny Janoary 2017. Efa mahatratra 788 ireo noraisana an-tanana nandritra izay 3 taona niasany tao amin’ny faritra Boeny sy ny faritra Analanjirofo izay.
Ireto Faritra roa ireto izay noraisina ho « pilote » amin’ny fanombohana ny tetikasa tao anatin’ny telo taona. Fanamorana, fandraisana an-tanana ny marary ny andribe no ataon’ny tetikasa Anjaratsara.
Ezaka maro no vita tao anatin’izay 3 taona izay toa ny fampiofanana ireo mpiasa eny amin’ny tombim-pahasalamana, ny fanampiana sy ny fandraisana an-tanana ireo marary ny androbe ary ny famerenana azy ireo eo anivon’ny fiarahamonina. Manamora ny fitsaboana ny aretina androbe ihany koa ny tetikasa.
Ankoatra izay dia manentanana ny mponina momban’ny aretina androbe ny tetikasa Anjaratsara.